युवा अवस्थामा कस्ता निर्णय गर्ने ? जान्नुस् महत्पूर्ण टिप्स – Everest Dainik – News from Nepal
युवा अवस्थामा कस्ता निर्णय गर्ने ? जान्नुस् महत्पूर्ण टिप्स
काठमाडौं । मानिसले युवा अवस्थामा के-के गर्न सक्छन् ? या के-के गर्नुपर्छ ? यसको ठ्याक्कै उत्तर पाउन गाह्रो छ । तर, ३० वर्षभन्दा कम उमेरमा गर्ने केही निर्णयले जीवन नै सुन्दर हुनेछ ।
यस्तो उमेरमा गर्ने फरक अनुभवले व्यक्तित्व निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । महिलाका लागि त यो अझ बढी महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले यो उमेरसम्ममा मानिसले गर्नुपर्ने केही कामको विषयमा एजेन्सीको सहयोगमा तयार पारिएको सामग्रीः
प्रायः मानिसमा बचपनको कुनै गतिविधिले डर हुने गर्छ । तर, यही उमेर अवधिमा तपाईं डराउने चिजसँग एकपटक पक्कै पनि सामना गर्नुस् । तर, आफ्नो जीवनलाई हानि नपुर्याउने गरी । भिड, व्यापार या अरू कुनै चिजसँग डर छ भने सामना गर्नुस् । यसो गर्दा डरलाई काबुमा राखी खुलेर जिउन सक्नुहुन्छ ।
जीवनमा सधैँ केही न केही सिक्ने प्रयास गर्नुपर्छ । यद्यपि, ३० वर्षभन्दा कम उमेरमा अझ बढी सिक्ने ऊर्जा हुन्छ । त्यसैले कुनै न कुनै रचनात्मक या रोचक कुरा सिक्नुस् । जसले तपाईंको जीवनलाई महत्वपूर्ण बनाउन सहयोग पुर्याउँछ ।
मानिस केही समय एक्लै बस्न जरुरी हुन्छ । यस्तो बानीले आत्मज्ञान प्राप्त गर्न सहयोग पुर्याउँछ । यद्यपि, साथीसँगका पनि सुखद क्षण हुन सक्छन् । तर, एक्लै बस्दा जिन्दगीलाई अझ नजिकबाट बुझेर काम गर्न सक्नुहुन्छ ।
जिन्दगीमा कुनै एड्भेन्चरको पनि अनुभव लिनुस् । आफूले आफैंलाई यस्तो चुनौती दिएर त्यसलाई सफल पार्नुहुन्छ भने तपाईंमा इनर्जी सञ्चार हुन्छ ।
जुन गतिविधिले कैयौँ वर्षसम्म सुखमय अनुभूति गराउँछ । त्यसका लागि प्याराग्लाइडिङ, रिभर र्याफ्टिङ, ट्रेकिङ, म्याराथन आदि गर्न सक्नुहुन्छ ।
तपाईले जिन्दगीमा कुनै यस्तो काम गर्नुस्, जसले रोलमोडल बन्न सहयोग पुर्याओस् । यस्तो कामले तपाईको आत्मविश्वास बढाउने काममा ठूलो भूमिका खेल्छ । तपाईं बच्चा, युवा वा वृद्धवृद्धा जोसुकै भए पनि रोलमोडलको बाटोमा हुन सक्नुहुन्छ ।
खासगरी ३० वर्षभन्दा कम उमेरबाटै यस्तो बाटो अवलम्बन गर्दा तपाईंले जीवनको सार्थकता महसुस गर्न सक्नुहुन्छ । रोलमोडल बन्ने क्षेत्रको सीमितता हुँदैन । तपाइँलाई कुनै पनि क्षेत्रमा रोलमोडल बन्ने छुट छ ।
यो उमेरमा गर्नुपर्ने एउटा काम प्रेम हो । जसले मानिसलाई फरक अनुभूति दिन्छ । हाम्रो समाजले प्रेमलाई विभिन्न कोणबाट परिभाषित गरको हुन्छ ।
यद्यपि, यो ३० वर्षअघि नै सुरु गर्नुपर्ने एउटा महत्वपूर्ण काम पनि हो । किनकि प्रेमविना मानिसको जीवन अपूरो हुन्छ । जिउनका लागि पनि प्रेम अपरिहार्यजस्तो छ । के थाहा, तपाइँको यही प्रेमलाई जीवनसंगिनी पो बन्छन् कि ।
गल्ती नगर्ने मानिस सायदै हुन्छ । जानी-नजानी हरेक मानिसले गल्ती गर्छ । गल्तीले सम्बन्धमा दरार उत्पन्न गराउँछ । त्यसैले गल्तीमा माफ गर्ने बानी बसाल्नु नै बढी बुद्धिमता हुन्छ । यस्तो बानीले तपाईंको व्यक्तित्वलाई पनि सुन्दर बनाउँछ ।
तपाईं कसैलाई उत्प्रेरणा दिन चाहनुहुन्छ भने हजारौँको बीचमा भाषण गर्न सक्नुहुन्छ । जसका माध्यमबाट थुप्रै मानिसबीच चिनिन पनि सहयोग पुर्याउँछ । र, तपाईं स्वयंका लागि पनि वर्षौँसम्म यादगार क्षण बन्न सक्छ । -नयाँ पत्रिकाबाट
ट्याग्स: Young decision
मानव अधिकार स्थापित गर्न जीवनपर्यन्त लाग्छुः अध्यक्ष शर्मा
वानडे सिरिजः भारतविरुद्ध हेटमाइरको शानदार अर्धशतक